NineElevenTruthCoin စျေး - အွန်လိုင်း NTC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NineElevenTruthCoin (NTC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NineElevenTruthCoin (NTC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NineElevenTruthCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
NTC – NineElevenTruthCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NineElevenTruthCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NineElevenTruthCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NineElevenTruthCoinNTC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00119NineElevenTruthCoinNTC သို့ ယူရိုEUR€0.00101NineElevenTruthCoinNTC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000907NineElevenTruthCoinNTC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00109NineElevenTruthCoinNTC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0107NineElevenTruthCoinNTC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00752NineElevenTruthCoinNTC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0265NineElevenTruthCoinNTC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00444NineElevenTruthCoinNTC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00158NineElevenTruthCoinNTC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00165NineElevenTruthCoinNTC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0266NineElevenTruthCoinNTC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0092NineElevenTruthCoinNTC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00651NineElevenTruthCoinNTC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0888NineElevenTruthCoinNTC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.2NineElevenTruthCoinNTC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00163NineElevenTruthCoinNTC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0018NineElevenTruthCoinNTC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0369NineElevenTruthCoinNTC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00825NineElevenTruthCoinNTC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.126NineElevenTruthCoinNTC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.4NineElevenTruthCoinNTC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.46NineElevenTruthCoinNTC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0871NineElevenTruthCoinNTC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0328
NineElevenTruthCoinNTC သို့ BitcoinBTC0.0000001 NineElevenTruthCoinNTC သို့ EthereumETH0.000003 NineElevenTruthCoinNTC သို့ LitecoinLTC0.00002 NineElevenTruthCoinNTC သို့ DigitalCashDASH0.00001 NineElevenTruthCoinNTC သို့ MoneroXMR0.00001 NineElevenTruthCoinNTC သို့ NxtNXT0.0893 NineElevenTruthCoinNTC သို့ Ethereum ClassicETC0.000168 NineElevenTruthCoinNTC သို့ DogecoinDOGE0.336 NineElevenTruthCoinNTC သို့ ZCashZEC0.00001 NineElevenTruthCoinNTC သို့ BitsharesBTS0.0433 NineElevenTruthCoinNTC သို့ DigiByteDGB0.0378 NineElevenTruthCoinNTC သို့ RippleXRP0.00392 NineElevenTruthCoinNTC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00004 NineElevenTruthCoinNTC သို့ PeerCoinPPC0.00381 NineElevenTruthCoinNTC သို့ CraigsCoinCRAIG0.526 NineElevenTruthCoinNTC သို့ BitstakeXBS0.0493 NineElevenTruthCoinNTC သို့ PayCoinXPY0.0202 NineElevenTruthCoinNTC သို့ ProsperCoinPRC0.145 NineElevenTruthCoinNTC သို့ YbCoinYBC0.0000006 NineElevenTruthCoinNTC သို့ DarkKushDANK0.37 NineElevenTruthCoinNTC သို့ GiveCoinGIVE2.5 NineElevenTruthCoinNTC သို့ KoboCoinKOBO0.263 NineElevenTruthCoinNTC သို့ DarkTokenDT0.00109 NineElevenTruthCoinNTC သို့ CETUS CoinCETI3.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 03:20:02 +0000.